Raira & Vanokunda: Zuva reTiberian, munhu wekare waunoziva achidzokera kuLinux | Linux Vakapindwa muropa
Raira & Vanokunda: Zuva reTiberian, munhu wekare waunoziva achidzokera kuLinux
Raira & Inokunda Zuva reTiberian iri zita rekare reimwe yeanozivikanwa mutambo wemavhidhiyo mitambo yemakore makumi mapfumbamwe, pamwe neDune 90. Iyi purojekiti yakabuda muWestwood Studios, uye yaizoonekwa muna 2000. Rondedzero yemazita aive akabudirira kwazvo uye aine akawanda akaburitswa, asi pamwe Zuva reTiberian rakave rinodiwa kupfuura vese.
Zvakanaka, ko kana ndikakuudza kuti ikozvino unogona kuridza zita iri zvakare kubva kune yako Linux distro? Zvakanaka hongu, ikozvino unayo inowanika muzvitoro zveapps seUbuntu Software, mune snap package uye uchiita kushandiswa kweWINE kuitira kuti ino chaiyo-nguva zano vhidhiyo mutambo unogona kumhanya mushe paGNU / Linux system. Ingo isa pasuru nekukurumidza, mhanya, mirira mamwe mapakeji kuti utore, sarudza mutauro kuti uise mukati, mirira kuti iise, tevera iyo yekuisa wizard sezvaungaita muWindows, uye utambe (panguva yekuita uchafanirwa kumhanya app yakaiswa kakawanda) ...
Iwe zvakare unayo yaunoshandisa pasuru yakafanana neiyi, asi ne Nyevero Tsvuku, chimwe chikamu cheSaga Command & Conquers. Zita risinganyanyozivikanwa kupfuura zuva reTiberian uye iro rakagamuchira kushoropodzwa, kunyanya pamashandisirwo aro. Red Alert 2 Yuri's Revenge inowanikwawo. Izvi zvinopedzisa huwandu hwetatu eaya marongero emitambo yemavhidhiyo yeanonyanya kufarira saga.
Kudzokera ku Command & Conquers Zuva reTiberian, kune avo vari vadiki uye vasingazvizive, iti iri zano revhidhiyo mutambo kwauchazofanira kugadzira guta rako pachako, kuridzivirira, nekukohwa iyo yakakosha Tiberium. Kuti uite izvi, unogona kusarudza zvikamu zvitatu zvakasiyana, senge GDI (Global Defense Initiative), hukama hweNOD. Kunyangwe paine zvakare Vakakanganwika, havana kukodzera kutamba navo, uye ivo chikamu chisina kwachakarerekera chevashanduki vanobatwa panyama nepfungwa neTiberium.
Zano resaga iri rinoenderera nemutungamiri weNOD, Kane, akasiyiwa achinzi afa. Asi inoonekwa zvakare kubva nzvimbo yake yokuvanda Nemauto akavandudzwa nemauto matsva, akatsunga kutonga pasi rese. GDI Mutungamiriri Michael McNeil ane basa rekudzivirira pasi rose kuwira mumaoko eNOD.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Linux Mitambo » Raira & Vanokunda: Zuva reTiberian, munhu wekare waunoziva achidzokera kuLinux
China yakaumba uye ikashandisa kushandisa kweNSA 0-Day kwemakore isati yaenda kuruzhinji
Toshiba Inotangisa FC-MAMR, Yekutanga Helium-Yakasimbiswa 18TB HDD